VIP Access 4.1.8 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 4.1.8 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Application မ်ား ကိရိယာမ်ား VIP Access
VIP Access ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Symantec က VIP Access ကိုသင့်ရဲ့ VIP-enabled အကောင့်အတွက်လက်မှတ်ထိုးတဲ့အခါခိုင်မာတဲ့ authentication process ကို အသုံးပြု. သင်၏အွန်လိုင်းအကောင့်များနှင့်အရောင်းအကာကွယ်ပေးကူညီပေးသည်။
• Strong စစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်း: သင်၏ VIP-enabled အကောင့်သို့ logging တဲ့အခါမှာခိုင်မာတဲ့နှစ်ခု-Factor authentication ကိုပေး။
• QR / App ကို Code ကို: သင်၏အကြိုက်ဆုံးက်ဘ်ဆိုက်များမှခိုင်မာတဲ့နှစ်ခု-Factor authentication များကို site ကို-တိကျတဲ့လုံခြုံရေး codes တွေကိုထုတ်လုပ်ဖို့ဟာဖို့အတွက် QR Code ကို scan လုပ်ပါ။
ထိုကဲ့သို့သောကို eBay, PayPal က, E ကို * TRADE ကို, Facebook, Google ဒါမှမဟုတ် VIP ကွန်ယက်အတွင်းအင်တာနက်ဆိုက်များတွင်ရာပေါင်းများစွာသောမဆိုတစ်ဦးအဖြစ်ပါဝင်သည့်အဖွဲ့အစည်းများမှာအသုံးပြုမှု VIP Access ကို:
VIP Access ကိုအောက်ပါနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုအတွက်သင်၏ပုံမှန်ရဲ့ login မှခိုင်မာတဲ့ authentication ကိုဖြည့်စွက်:
• Dynamic သင့်မိုဘိုင်း device ကိုအပေါ်တစ်ဦးတဦးတည်းအချိန်အသုံးပြုမှုလုံခြုံရေးကုဒ် generate ။ သင့်ရဲ့ username နဲ့ password ကိုနဲ့အတူကြောင်းကုဒ်ကိုသုံးပါ။
•သင်စစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်းအဖြစ်အတည်ပြုကြောင်းကိုသင်၏မိုဘိုင်း device ပေါ်မှာတွန်းအားပေးသတိပေးချက်ရယူရန်။ သင်၏အဖွဲ့အစည်းလုံခြုံရေးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့နောက်ထပ် device ကိုစစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်းယန္တရားသတ်မှတ်ရန်သင့်အားလိုအပ်သည်လျှင်, သင်ထိုကဲ့သို့သော PIN နံပါတ်, ပုံစံ, စကားဝှက်, ဒါမှမဟုတ်လက်ဗွေရာအဖြစ်နောက်ထပ်ဒေသခံ authentication များကိုသတိပေးခံရလိမ့်မည်။
မှတ်ချက်: လက်ဗွေ authentication ကိုသင့်မိုဘိုင်း device ကိုလက်ဗွေနိုင်စွမ်းနှင့်သင် device ကိုအပေါ်တစ်ဦးလက်ဗွေမှတ်ပုံတင်ကြောင်းကိုလိုအပ်သည်။
သင်ကွန်ယက်သို့မဟုတ်မိုဘိုင်းဆက်သွယ်မှုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်ပင်လုံခြုံရေးကုဒ် generate နိုင်ပါတယ်။
QR / App ကိုကုဒ်များ
လုံလုံခြုံခြုံအတွက်လက်မှတ်ရေးထိုးရန်လုံခြုံရေးကုဒ်တိုင်းစက္ကန့် 30 generate တို့အားဤသို့သော Google, Facebook, Amazon, အဖြစ်ပါဝင်သည့်အဖွဲ့အစည်းများမှာ QR Code ကို scan နှင့်ပိုပြီး။ သင်အကြိုက်ဆုံးက်ဘ်ဆိုက်များမှခိုင်မာတဲ့ authentication ကိုထည့်သွင်းဖို့သင့်ရဲ့စကားဝှက်ကိုနဲ့အတူဒီလုံခြုံရေးကုဒ်ရိုက်ထည့်ပါ။
VIP Access ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီးနောက် VIP End User Agreement ကိုဖတ်ရှုဖို့သေချာပါစေ:
VIP Access အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
VIP Access အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
VIP Access အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
VIP Access အား အခ်က္ျပပါ
apps-me စတိုး 53.77k 16.43M
VIP Access ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း VIP Access အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 4.1.8
ထုတ်လုပ်သူ Symantec VIP
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.symantec.com/privacy
လက်မှတ် SHA1: E5:6A:2A:D4:DC:59:84:8A:BF:E0:2A:88:3C:AE:D6:6E:9A:05:B0:8E
ထုတ်လုပ်သူ (CN): VERISIGN
အဖွဲ့အစည်း (O): VERISIGN INC
VIP Access APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ